जन्मदिनमा केक काटेर बत्ति निभाउनु हाम्रो संस्कृति होईन, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य – Life Nepali
जन्मदिनमा केक काटेर बत्ति निभाउनु हाम्रो संस्कृति होईन, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले जन्म दिनमा केक काट्नु आफ्नो सस्कृति नभएको बताएकी छिन् । नेकपा काठमाडौं महानगर कमिटीले नेपाल सम्बत् ११४० को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शाक्यले भनिन्,“अहिले सामाजिक सञ्जालमा हामीले धेरै देख्ने गरेका छौँ सबैले जन्मदिन मनाउने गरेका छन् । जन्मदिन मनाएर फेसबुकमा हाल्ने अहिले चलन नै चलेको छ । सबैले जन्मदिनमा केक काट्ने गरेका छन् । केक काटेर खानुस् त्यसमा अन्यथा छैन । परिवर्तन खबरबाट साभार गरिएको । तर केक काट्नेसँगै बत्ती निभाउने जुन चलन छ।
त्यो कहाँबाट सुरु भयो ? जन्मदिन मनाउँदा आखिर हामी बत्ती किन निभाउँछौँ त ? हामी अन्धकारतिर नभएर उज्यालोतिर ढकेलिनु पर्ने हो नि ? कम्तिमा जन्मदिनको कुरा गर्दा हाम्रो परम्परालाई पछ्याउँ भन्ने मेरो कुरा हो । केक काट्ने कुरा हाम्रो होइन । भाषाकै कुरामा पनि मैले जोड गर्न चाहे । हाम्रो भाषालाई हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदा हाम्रै बच्चाले हाम्रो भाषालाई प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा छलफल गर्नु आवश्यक छ । महानगरले लागू गरेर मात्र भाषा जोगिदैन । ठिक छ अन्य भाषाहरु हामीले सिक्नुपर्छ तर हाम्रो भाषालाई हामीले कसरी महत्व दिने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु आवश्यक छ ।”
संविधानले समेत परम्परालाई, संस्कृतिलाई एकअर्का मिलेर मनाऔँ भनेको छ । यसो भनिरहँदा संविधानले संस्कृतिभित्रको कतिपय गलत कुराहरु हटाउने विषयपनि उठाएको छ । त्यसैकारण साँस्कृतिक पर्वहरु जुन समयमा आउँछन् , त्यसबेला यसबारे छलफल गरेर अघि बढ्न सकियो भने हाम्रो संस्कृति अझै सु–सँस्कृत हुनसक्छ । हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ भने समयको रुपान्तरण अनुसार कतिपय संस्कृतिमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु आउँदैनन् । नयाँ ढङ्गले सँस्कृतिलाई हामीले विकास गर्न सक्दैनौं । त्यसैकारण यो हाम्रो काम हो । त्यसमा पनि अझ यो नेकपाको काम हो भन्न रुचाउँछु म ।”
Previous मं’सिर ०२ गते सो’मबार’को रा:शिफल प:ढ्नुहोस् !
Next पाथिभरा माताको दर्शन गरी : मंसिर ०३ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस्